…lasa izao | Grandir à Antsirabe
... lasa izao
Ny zoma faha 15 jona lasa teo dia andro tsy toy ny andro rehetra ho an’ny ankizin’ny trano fandraisana vonjimaikan’ny fikambanana. Nihazo ny lalana mankany amin’ny toeram-piompiana Tombontsoa izy ireo. I Njaka izay mpiofana tao amin’ny ekipan’ny PPER, niaraka tamin’ireo mpilatsaka antsitra-po julie sy i Marion ary koa ny mpanabe Arsène no niara-nisalahy nanomana ny tontolo andro tany amin’ny toeram-piompiana izay tena nahafaly tanteraka ireto ankizy.
Fitsidihana ny toera-mpiompiana eny Tombontsoa
Vao maraina, niditra tao anatin’ny fiara ireo mpandray anjara ary hita soritra teny amin’ny endrik’izy ireo ny hafaliana. Ankizy, mpanabe, mpanontrona sy mmpiasan’ny fikambanana no nifampotoana teny Tombontsoa, toerana izay ahitana toeram-pambolena sy toeram-piofanana ihany koa. Eo amin’ny 400 eo ireo ankizy misitraka izany fiofanana izany, manomboka any amin’ny ambaratonga fahatelo katramin’ny fampianarana ambony, fiofanana izay mifandraika amin’ny resaka fambolena sy fiompiana.
Fandaharam-potoana tamin’ny maraina : fitsidihana ireo fotodrafitrasa izay notarihin’ny mpianatra iray ao an-toerana. Nofantarina tamin’izany ireo atrik’asa, ireo zaridaina fambolena ary ireo tranom-biby. Nanaraka ny fandaharana nataon’ny mpitarika ireo ankizy ary nankafy ny fiarahana. Nisy tamin’ireo ankizy no nanana fanontaniana, maro ireo liana tamin’ny hetsika ary tsy nisalasala izy ireo nametraka fanontaniana mahakasika ireo biby na momban’ny fampiofanana. Mety ho hisy tokoa ireo ankizy hisafidy ny hamboly sy hiompy tamin’ny alalan’iny fitsidihana iny.
Tohin’ny fotoana sy ny fisakafoanana
Rehefa vita ny fitsidihana dia naka aina ny rehetra ary nisy fizarana mofo. Rehefa velombelon’aina iny dia raikitra ny fanafanan-tena narahan’ny filalaovana baolina kitra.
Tonga ny mitatao vovonana, fotoana hisakafoanana izay nankafizana ireo nahandron’ireo mpahandro roa eto amin’ny fikambanana. Ny sakafo tamin’izany ? : riz cantonnais niaraka tamin’ny saosisy sy lasary laisoa izay tena nakafizin’ny ankizy miaraka amin’ny tsindrin-tsakafo akondro. Nisy koa ny fizarana ranom-boankazo nandritry ny fisakafoanana mba hanamarihana tsara ny lanonana.
Fandravahana tarehy, fakana aina sy fisaintsainana
Rehefa voky tsara ny kibo dia nitohy indray ny fanentanana. Julie sy i Marion no nanentana ny fandokoana tarehy. Niova ho fotoana nakana aina nankafizin’ny ankizy ity fandokoana tarehy ity. Naneho ny fahaizana mamorona tokoa ireo mpanentana : Pirates, mpanjaka vavy kely, voninkazo, biby no nadravaka ny tarehin’ireo ankizy.
Nibaliaka ny masoandro izay nanome hafanana ny tontolo andro, namaranana izany ny hetsika nataon’i Julie momban’ny fakana aina sy fisaintsainana, atrik’asa izay tena ankafizin’ireo ankizy ary tian’izy ireo ny mampihatra azy.
Iny fotoana iny ihany koa no nahafahan’i Nathanaël, tale lefitry ny fikambanana, nanambara ny fandehananay tamin’ireo ankizy. Fotoana feno fihetseham-po. Mba hampitony ny fo dia nofaranana tamin’ny fankafizana chocolat sy akondro ny fotoana.
Fodiana nakany amin’ny CHT narahin-kira, fahatsiarovana vaovao no miraikitra ao an-doha.
Lire aussi : Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!